आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बोनस सूचिकृत (कती?) – OnlinePahar
आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बोनस सूचिकृत (कती?)
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२० Basanta Khanal	0 Comments	Bonus share
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा आज (बुधबार) एक कम्पनीकाे बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । स्टकका अनुसार नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडकाे ८ प्रतिशत बाेनस बापतकाे ३ लाख ६५ हजार ८ सय ३५ दशमलव २४ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको हाे । कम्पनीले ८ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे ।
यो पनि पढ्नुहोस्: काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज ४ गतेदेखि नयाँ नोट वितरण गर्ने भएको छ । विगतमा झैं यो वर्ष पनि दशैंका लागि सबै वाणिज्य बैंकका शाखाबाट नोट वितरण गर्न लागिएको हो । नोट वितरण मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुसार धेरै बैंकले नयाँ नोट लगिसकेकोले अब वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले गएको बर्ष भने नयाँ नोट वितरण गरेको थियो । गएको बर्ष कोरोना महामारीका कारण भीडभाड हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले नोट वितरण गरेको थिएन । यसअघि राष्ट्र बैंकले घटस्थापनापछि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको थियो । यस बर्ष प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले नयाँ नोट वितरण गर्न लागिएको छ । बेंकले यस बर्ष पनि ५, १०, २०, ५० र १०० रुपैयाका नयाँ नोट वितरण गर्दैछ ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ३० भाद्र २०७८ बुधवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, ३१ भाद्र २०७८ बिहिवारको राशिफल पढौं →
सेयर बजारमा साताभर के–के भयो, नेप्से अब कता जाला ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:३९ Basanta Khanal	0